book close(book close) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
नेशनल माइक्राफाइनान्सको बम्पर लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बम्पर लाभांश सुरक्षित गर्ने आज पुस २६ गते अन्तिम मौका रहेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि संस्थाले भोलि पुस २७ गते बुक क्लोज गर्दैछ। यसको अर्थ आज पुस २६ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्रै यो संस्थाको लाभांश पाउन र सभामा भाग लिन योग्य हुनेछन्। संस्थाले...
आजसम्म कायम सेयरधनीले यी २ फाइनान्सको लाभांश पाउने
काठमाण्डौ । दुईवटा फाइनान्स कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज पुस २१ गते अन्तिम मौका रहेको छ। श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेका लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका हो। यी दुवैले भोलि पुस २२ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसको अर्थ आज पुस २१ गतेसम्म...
दुई फाइनान्ससहित ४ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । दुई फाइनान्ससहित ४ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज (पुस २० गते) अन्तिम दिन रहेको छ। मल्टीपर्पस फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त र कालिका लघुवित्तको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका रहेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि यी कम्पनीले भोलि पुस २१ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेका छन्।...
आजसम्म कायम सेयरधनीहरुले सिभिल बैंक र रिलायन्स फाइनान्स लाभांश पाउने
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक र रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज पुस १९ गते अन्तिम मौका रहेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका सिभिल बैंक र रिलायन्स फाइनान्सले भोलि पुस २० गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसको अर्थ आज पुस १९ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्रै यी कम्पनीको लाभांश पाउन योग्य हुनेछन्। सिभिल बैंकले गत...
यी ५ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका, कसको कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत ५ कम्पनीको गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित लाभांश सुरक्षित गर्ने आज पुस १८ गते अन्तिम मौका रहेको छ। सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, मिर्मिरे लघुवित्त, मिथिला लघुवत्त र कालिका पावर कम्पनी लिमिटेडको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका रहेको हो। यी कम्पनीले लाभांश...
मञ्जुश्री फाइनान्ससहित ५ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका, कसको कति ?
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्ससहित ५ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज पुस १४ गते अन्तिम मौका रहेको छ। मञ्जुश्री फाइनान्स, चिलिमे हाइड्रोपावर, समिट लघुवित्त, इन्फिनिटी लघुवित्त र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका रहेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि भोलि पुस १५ गते बुक...
आजसम्म कायम सेयरधनीहरुले यी तीन कम्पनीको लाभांश पाउने, कसको कति ?
काठमाण्डौ । नेप्सेमा सूचीकृत ३ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज पुस १३ गते अन्तिम मौका रहेको छ। मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, उन्नति सहकार्य लघुवित्त र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका रहेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि यी कम्पनीहरुले भोलि पुस १४ गते बुक क्लोज गर्दैछन्। यसको अर्थ आज पुस १३...
आजसम्म कायम सेयरधनीले यी तीन कम्पनीको लाभांश पाउने, कसको कति ?
काठमाण्डौ । नेप्सेमा सूचीकृत तीन कम्पनीले गत आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरेका लाभांश सुरक्षित गर्ने आज पुस १२ गते अन्तिम मौका रहेको छ। महालक्ष्मी विकास बैंक, निर्धन उत्थान लघुवित्त र नेपाल हाइड्रो डेभलपरको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका रहेको हो। यी तीन कम्पनीले लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि भोलि पुस १३ गते बुक क्लोज...
आजसम्म कायम सेयरधनीहरुले एनसीसी बैंकको लाभांश पाउने
काठमाण्डौ । एनसीसी बैंक लिमिटेडको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज पुस ११ गते अन्तिम मौका रहेको छ। वार्षिक साधारणसभा र लाभांश प्रयोजनका लागि बैंकले भोलि पुस १२ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ आज पुस ११ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्रै यो बैंक लाभांश पाउन र सभामा भाग लिन योग्य हुनेछन्। बैंक गत आर्थिक वर्षका लागि कुल ८.४२ प्रतिशत...
यी दुई लघुवित्तको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका, कुनको कति ?
काठमाण्डौ । दुई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज पुस ११ गते अन्तिम मौका रहेको छ। महुली लघुवित्त र विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका रहेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि यी दुवै लघुवित्तले भोलि पुस १२ गते बुक क्लोज...
आजसम्म कायम सेयरधनीले समृद्धि फाइनान्सको हकप्रद भर्न पाउने
काठमाण्डौ । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले निष्कासन गर्न लागेको हकप्रद भर्न योग्य हुन आज पुस ८ गतेसम्म सेयरधनी हुनुपर्ने अन्तिम मौका रहेको छ। कम्पनीले हकप्रद निष्कासनका लागि यही पुस ११ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो। यसर्थ आज पुस ८ गते (पुस ९ गते शुक्रबार र पुस १० गते शनिबार) सम्म कायम सेयरधनीहरुमात्रै यो कम्पनीको हकप्रदमा...
आजसम्म कायम सेयरधनीहरुले यी ४ कम्पनीको लाभांश पाउने, कसको कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत ४ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज पुस ८ गते अन्तिम मौका रहेको छ। ज्योति विकास बैंक, बुटवल पावर कम्पनी, एनएमबि लघुवित्त र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका रहेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि यी कम्पनीमध्ये ज्योति विकास बैंक, एनएमबि...
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षका लागि घोषित दुई वाणिज्य बैंकसहित चार कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज मंसिर ६ गते अन्तिम मौका रहेको छ। एनएमबि बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, गणपति लघुवित्त र छिमेक लघुवित्तको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका रहेको हो। यी ४ कम्पनीले लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि भोलि मंसिर ७ गते बुक क्लोज...
आजसम्म कायम सेयरधनीहरुले स्वावलम्बन लघुवित्तको २५% लाभांश पाउने
काठमाण्डौ । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज पुस ५ गते अन्तिम मौका रहेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि संस्थाले भोलि पुस ६ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ आज पुस ५ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्रै यो लघुवित्तको लाभांश पाउन र सभामा भाग लिन योग्य हुनेछन्। संस्थाले गत...